Isgaarsiinta-waqtiga-dhabta ah: Waa maxay WebRTC? | Martech Zone
Isgaarsiinta waqtiga-dhabta ah ayaa badaleysa sida shirkadaha ay uga faa’iideysanayaan shabakadooda si ay si firfircoon ula falgalaan rajada iyo macaamiisha.
Waa maxay WebRTC?
Isgaarsiinta Real-Time Isgaarsiinta (WebRTC) waa ururinta hab maamuuska isgaarsiinta iyo API-yada asal ahaan ay soo saartay Google ee u suurta geliya waqtiga iyo waqtiga dhabta ah xiriirka iyo isgaarsiinta isku xidhka asxaabta. WebRTC waxay u oggolaaneysaa daalacayaasha shabakadaha inay ka codsadaan macluumaadka waqtiga-dhabta ah daalacashada isticmaaleyaasha kale, taasoo awood u siineysa waqtiga-u-faca-iyo-wada-hadalka iyo wada-hadalka kooxeed oo ay ku jiraan codka, fiidiyowga, sheekaysiga, wareejinta feylka, iyo wadaagga shaashada
Twilio - Waa maxay WebRTC?
WebRTC waa meel walba.
Suuqa caalamiga ah ee WebRTC wuxuu ahaa $ 1.669 bilyan oo doolar sanadkii 2018 waxaana lafilayaa inuu gaaro $ 21.023 bilyan oo doolar adduunka sanadka 2025.
Cilmi baarista Sion
Sanado ka hor, WebRTC waxay u bilaabatay sidii adeeg bixiyaha maamuuska VoIP ee beegsanaya daalacayaasha shabakadaha. Maanta, ma jiro biraawsar daadihiya maqal / muuqaal iyada oo aan la hirgelin WebRTC. In kasta oo halkaan ay joogaan qaar ka mid ah iibiyeyaasha aaminsan in WebRTC ay ku fashilantay inay ku noolaato wixii ay ka filayeen, laga yaabee inay yihiin iibiyeyaashii ku fashilmay inay adeegsadaan WebRTC si ay uga faa'iideystaan ​​khibrad isticmaale oo ka sarreeya.
WebRTC waxay ku saabsan tahay kobcinta wada sheekaysiga waqtiga-dhabta ah ee loo maro shabakadda internetka. Dhawaan, Google wuxuu shaaca ka qaaday in Chrome ay hayso in ka badan 1.5 bilyan oo maqal / muuqaal toddobaadle ah daqiiqado gudahood. Taasi waa qiyaas ahaan 214 milyan oo daqiiqo maalintii. Taasina waa uun ku jirta Chrome! Waa tan muuqaal faahfaahsan oo ku saabsan awoodaha laga helay adoo adeegsanaya WebRTC.
Waa maxay Isgaarsiinta-waqtiga-xaadirka ah ee laga heli karo WebRTC?
Wadaagista Shaashadda - Si fiican uga faa'iideyso iskaashiga aad la leedahay isticmaaleyaasha kale isla markiiba. WebRTC 'Android / iOS codsi wada sheekeysiga fiidiyowga wuxuu awood u siinayaa wadaagista shaashadda masaafad fog qalab kale ama isticmaale leh marin ku habboon. Iyadoo la adeegsanayo calaamadda 'WebRTC', iskaashiga casriga ah ee fog waxaa aasaasay laba ka mid ah hoggaamiyeyaasha hoggaamiyeyaasha isgaarsiinta ee kala ah Skype& Muraayad. Muuqaalka wadaagista shaashadda ayaa casriyeynaysa iskaashiga ganacsiga oo dhan illaa heerka xigga halkaas oo shirarka ku saleysan shirarka ay yihiin shaqooyinkooda aasaasiga ah. Laga soo bilaabo doodaha ilaa bandhigga, websaydhyada illaa kulammada, wadaagista shaashadda ayaa xudunta u ahayd.
Shirka Fiidiyow ee isticmaala badan - Shirar fiidiyoow badan oo adeegsadeyaal ah oo heer sare ah ayaa u baahan cabbir badan si loola macaamilo tan oo isticmaaleyaal isku mar ah, waa halka ay ku sheekeysaneyso websaydhka WebRTC. WebRTC server signaling wuxuu u oggolaanayaa sameynta waqti-dhab ah oo siman fiidiyoow xisbiyo badan iyo wicitaanno cod ah oo adduunka ah. Fiidiyowga iyo wicitaanka codka ee WebRTC ayaa dalbanaya qaddarka ugu yar ee qulqulka warbaahinta si loogu xiro dhammaan kaqeybgalayaasha wicitaanka fiidiyowga ee dhinacyada badan. Barnaamijka wicitaanka fiidiyowga ee WebRTC wuxuu cabirayaa iskuxirka dhinacyada badan ee loo maro MCUs (qaybaha xakamaynta Multipoint) iyo SFUs (Cutubyada gudbinta Xulista).
Wadashaqeynta Fudud - Maalmahaa markii hore aad saxeex ku geli jirtay koonto, soo dejiso boggaga oo aad ku rakibto dhowr meelood oo kaliya si aad ula xiriirto isticmaale kale si aad ula sheekaysato. Iyada oo loo marayo WebRTC codka iyo serverka fiidiyowga lagu sheekeysto, ma jiri doonaan habab dhaqameed. Wadahadalka qoraalka WebRTC wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon oo fudud in lala kulmo iskaashi bilaa muuqaal ah. Wadashaqeynta-waqtiga-dhabta ah waxaa loo fududeeyay qaababka lagu aasaasay daalacashada ay taageerto WebRTC.
Faylka Wadaagga - Gudbinta xog aad u tiro badan ayaa had iyo jeer ahayd ficil dhib badan oo dhib badan halkaas oo dadka isticmaala u horseedaan inay u wareegaan codsiyada kale sida Email ama wadista. Nidaamka gudbinta xogta maahan mid fudud, wuxuu cunay waqti badan, dadaal iyo xog. Iyada oo loo marayo server signaling WebRTC, waxay ku yareyneysaa nidaamka adoo u oggolaanaya inay si toos ah ugu dirto iyada oo loo marayo websaydh ku lifaaqan wicitaanka fiidiyaha API. Intaa waxaa sii dheer, WebRTC wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku soo gudbiso feylasha qaab qarsoodi ah oo aad u hooseeya wax alla wixii xawaareyn ah. Dusheeda, WebRTC waxay u gudbisaa xogta hoosta hal saqaf ammaan ah.
Isgaarsiinta Fiidiyowga iyo Codka badan oo amni leh - WebRTC Signaling WebSockets waxay siisaa borotokool adag oo RTP ah (SRTP) kaas oo qarinaya dhammaan wada sheekeysiga codka WebRTC ee lagu gudbiyo barnaamijyada Android, iOS & web. Sidoo kale, waxay soo saartaa xaqiijin isgaarsiinta Wifi si loo ilaaliyo wicitaanka marinka aan la rabin iyo duubista wicitaanada.
Adeegyada-waqtiga dhabta ah ee Wada Xiriirka Tooska ah - WebRTC waxay awood u leedahay inay ku dhex milmaan codsi kasta si ay ula kulmaan wada hadal toos ah qaybaha oo dhan. Kaabayaasha WebRTC & wada sheekaysiga fiidiyowga SDK wuxuu abuuraa waddo toos ah oo wada hadal toos ah looga sameeyo waxkastoo warshadaha ah, laga bilaabo tafaariiqda, ganacsiga, daryeelka caafimaadka, taageerada macaamiisha, waxay bixisaa adeegyo isgaarsiineed oo waqtiga-dhabta ah.
Xiriirinta Latency-ga hooseeya - Video Call API oo leh isdhexgalka WebRTC waxay awood u siineysaa inay si toos ah xogta ula wadaagaan aaladda ama arjiga iyadoon la gelin taxanaha server-yada. Marin-u-helka dhex-dhexaadiyaha wuxuu hagaajinayaa socodka xogta iyo faa iidooyinka faaiidada ee shabakad daahitaan hoose. WebRTC karti u leh arjiga wada sheekaysiga khibrad badan oo farriimo iyo faylal u leh codsi kale iyadoon loo eegin baaxadda ballaadhan ee degelku leeyahay.
Wicitaanka Fiidiyowga WebRTC adoo adeegsanaya Node.js
Isku-darka WebRTC adoo adeegsanaya MirrorFly
Marabtaa inaad bilowdo maanta? Fiiri MirrorFly's Real-Time API Chat. Iyaga oo adeegsanaya Chat API, waxaad ku dhisi kartaa barnaamijyo fariimo badan oo fariin ah adoo adeegsanaya astaamo iyo howlo kala duwan. Waxay bixiyaan API-waqtiga dhabta ah ee barnaamijyada websaydhka iyo SDK ee barnaamijyada moobiilka ee Android iyo iOS.
Tags: google +waqtiga dhabta ahrtcshaashaddasdkshir-jaraa'idwebrtc